मंगलग्रहमा भीषण आँधी चल्यो, नासामा छटपट्टी ! - Eall Nepal
मंगलग्रहमा भीषण आँधी चल्यो, नासामा छटपट्टी !
एजेन्सी– पृथ्वी पछि जीवनको सम्भावना रहेको भनिएको मंगलग्रहमा पछिल्ला दिन भीषण आँधी चलेको अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले जनाएको छ । मंगलग्रहमा भीषण आँधी चलेपछि नासाले प्रक्षेपण गरेको यानको अस्तित्वनै संकटमा परेको जनाइएको छ । नासाले प्रक्षेपण गरेको दुईवटा मानवरहित यान अहिले मंगलग्रहमा जीवनको अस्तित्वको बारेमा खोज(अनुसन्धान) गरिरहेका छन् ।
नासाको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार यसबेला मंगलग्रहको करिब ३.५ करोड वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा भीषण धुलोसहितको आँधी मडारिरहेको छ । आँधीका कारण मानवरहित यानको सिस्टम नै अफ भएको छ । सो आँधीका कारण मंगलग्रहमा सुर्यको प्रकाश समेत अवरुद्ध भएको नासाको रिपार्टमा उल्लेख छ ।
नासाका मंगलग्रह खोज अनुसन्धान विभागका प्रोजेक्ट म्यानेजर जोन कलासका अनुसार उक्त ग्रहमा अहिले अपरच्युनिटी र स्पिरिट नामका दुई मानवरहित यान खोजमा व्यस्त रहेका छन् । मे ३० देखि सुरु भएको उक्त आँधी अहिले थप तीव्र गतिमा चलेको नासाको दाबी छ । दुई यानमध्ये एउटाले पछिल्लोपटक जुन १० मा सम्पर्क गरेको र त्यसयता सम्पर्कविहिन भएको नासाले जनाएको छ ।
नासाले दुवै यान सन् २००३ मा मंगल ग्रहमा प्रक्षेपण गरेको थियो । एक वर्षअघि मात्र ती यान मंगल धर्तीमा अवतरण गरेका थिए । सम्भवत केही दिनमै सो आँधी मत्थर हुने र यानसँगको सम्पर्क निरन्तर हुने नासाले जनाएको छ ।
रसिया विश्वकपमा सहभागी सर्वाधिक पाँच धनी खेलाडी थाहा पाउनुहोस कसको कमाई कति ?
हरेक अविबाहित केटाहरुका लागी खुसिको खबर ! गर्लफ्रेण्डले धोका दिएपछि के गर्ने ? पुरा जानकारी
हरेक मानिसले पत्थरीबाट बच्नका लागी यी सात काम भुलेर पनि नगर्नुहोस
तपाइलाई थाहा नहुन पनि सक्छ सन्तान जन्मिएपछि महिलालाई यस्तो रोगले सताउँछ समयमै जानकारी लिनुहोस
CASE Research Guidance Services: Top notch Arguments TO Rely ON US
While you payavisit to the internet site, you can frequently make contact with our buyer treatment assistance workforce,…
The Unusual Puzzle Into Descriptive Essay Exposed What Absolutely everyone Despises About Descriptive Essay and Why Your essay may be…
Here’s The Things I Understand…
Here's The Things I Understand About Request Essay Via the internet Finest Order Essay Over the internet Solutions In cases…
The Online World is packed with tricks for newbies: discover how to get successful notices in style, cite options in…
Tips on How to Post an Essay as well as It Vibrant
Don't let it sit all to risk - gain knowledge from the greatest and stay the most effective. We provide…
Most Noticeable Best Cannabidiol Oil With so many CBD oil product that can be found on the industry these days,…
Best Prepare Essay in my opinion…
Best Prepare Essay in my opinion Possibilities Your essay will have to be impressive just before syndication. create the essay…
Really Know What an Old Pro Thinks…
Really Know What an Old Pro Thinks About Heavener Gpa Calculator You can utilize the really exact strategy to calculator…
New Ideas Into Most Useful Android Vpn Program Never-before Deciding On
Furthermore, the program could be applied on five unique devices with one PureVPN account. However, also for the role the…
Who’s Focused On Get Essay Paper…
Who's Focused On Get Essay Paper and Why should you be Paying Attention An individual may without difficulty buy a…